tao Filipina, izay firenena kely ao ny endriky ny ambony ambany»Y»any Azia Atsimo atsinanana. Aho no nifindra tany New York aho rehefa efatra ambin’ny folo sy ny mafy niezaka ny hahita ny mahay mandanjalanja eo ny kolontsaina sy ny vaovao mahazatra ny kolontsaina Tandrefana. Anisan’ny fa American voaray tafiditra mampiaraka. Indrindra Filipinas (vehivavy ny»Filipino»), tahaka ahy, mora ny miandry ny tara ny tanora na tany am-boalohany s manomboka ny fiarahana, satria isika efa nanangana ny finoana fa ny fianakaviana sy ny fianarana no tonga voalohany. (Nanampy aho fa nanatrika ny Rehetra Zazavavy Katolika ny Sekoly ambaratonga faharoa ka any dia tena kely ny fakam-panahy.) Fa raha izaho farany dia nanomboka ihany mampiaraka ny tsy Filipiana olon-tiany, dia nisy vitsivitsy ny zavatra nilainy ho fantatra: ny Iray ara-kolontsaina ny lanjany fa ireo Filipiana avonavona ny tenany eo no»akaiky ny fifandraisan’ny fianakaviana. Ny»Filipino ny fianakaviana ary amin’ny ankapobeny, indrindra any Azia ny fianakaviana tena akaiky. Ny olona rehetra pitches ao mba hitaiza ny zaza amin’ny ray aman-godparents ny manaraka-trano mpifanolo-bodirindrina aminy. Raha ny marina, ny ara-tantara, ireo Filipiana fiarahana mahakasika ny lehilahy manao ny asa fanompoana ho an’ny zazavavy ny fianakaviana (mpanondraka rano, manamboatra ny tapaka tampon-trano, etc.) toy ny porofo ara-batana ny fanoloran-tena ho azy sy ny fianakaviany. Ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra ho antsika, indraindray dia zava-dehibe kokoa amintsika noho ianao. (Miala tsiny.) Noho izany, toy ny zava-Manitra Vavy hoe: Raha te-ho tia azy, dia natao mba hahazoana azy amin’ny namana sy ny fianakaviana. Ary na oviana na oviana, mandrakizay, mandrakizay ny faniratsirana olona iray ao amin’ny fianakaviana. Isika Filipiana koa no nilaza hoe:»Raha te fitsarana ilay tovovavy, ny fitsarana ny reniny.»Matokia ahy. Miasa. Raha vao lasa ampy taona ho amin’ny daty, ny reniko tamiko,»tsy miraharaha izay foko izy, raha mbola ny Katolika.»Satria izahay avy hentitra sy mpitahiry ny nentin-drazana Katolika Romana firenena, indrindra Filipinas dia hihaona tena mety hitandrina fety Katolika, dia mavitrika ao amin’ny fiangonana, ary manao ara-pivavahana paraphernalia ny hazo fijaliana rojo, ohatra. Mandritra izany fotoana izany, fantatro ny sasany Filipinas izay tsy mampaninona raha ny manan-danja hafa dia ny fivavahana hafa, na tsy mifanaraka amin’ny fivavahana. Nefa tandremo fa na dia ireo tsy miraharaha, ny fianakaviana mety, ka hanitsaka tsara.
Raha ny zanaky ny mpiray tampo amin’ny volon-koditra fifandraisana hitondra ny manan-danja hafa ny trano voalohany, ry zareo foana tototry ny habetsaky ny sakafo ny reniko mitantana ny manomana ny roa andro ny fe-potoana (Eny, roa.
Ny sakafo dia zava-dehibe)
Tsy afaka mandositra ny karaoke milina. Ny Filipiana ny fianakaviana dia tsy maintsy manana iray, fara fahakeliny, (satria olona samy hafa samy manana ny hira, fanahy). Noho izany, raha toa ka mahazo nanasa ny antoko ary ny olona rehetra dia mamo sy fihirana, miala tsiny aho, fa tsy afa-mandositra ny anao ny fitenenana.
Izahay dia manery anao mba hihira
Ry zalahy izay liana ao mampiaraka ahy ny nahita izany ny fanamby izy ireo, rehefa nahita aho mamonjy ny tenako ho amin’ny fanambadiana. Mihevitra izy ireo fa afaka tsikelikely ny fanerena ahy sy handrava ahy, fa Filipinas atsangana ireo mba hino ny firaisana ara-nofo dia ho misy olona mikasa handany ny sisa amin ny fiainanareo. (Ny fivavahana Katolika dia manana anjara ao izany, koa.) Mazava ho azy, ny sasany Filipinas miezaka ny tsy firaisana ara-nofo mpandala ny nentin-drazana noho ny hafa, kanefa na izany aza, dia angamba tsy tia miresaka an-karihary ny momba ny zavatra niainany ny firaisana ara-nofo
← Mahafinaritra ao Filipina ny Lahatsary amin'ny chat room
Filipiana Ny Vehivavy, Ny Tovovavy, Pinay Ankizivavy Fikarohana →